विजयादशमीमा टेलिकमको सेवामा छुट – Everest Dainik – News from Nepal
विजयादशमीमा टेलिकमको सेवामा छुट
काठमाडौं, असोज ४, । नेपाल टेलिकमले नेपालीहरुको महान चाड विजया दशमीको उपलक्ष्यमा विगत वर्षहरुमा जस्तै यस वर्ष पनि कम्पनीका सेवाहरुमा विभिन्न छुट घोषणा गरेको छ ।
रिचार्जमा बोनसः जिएसएम तथा सिडिएमए प्रिपेड मोबाइलमा रिचार्ज कार्डमार्फत रिचार्ज गर्दा २०७४ असोज ५ गते देखी १० गते सम्म रु.५०, रु.१००, रु.२००, रु.५०० र रु.१०००का रिचार्ज कार्ड मार्फत रिचार्ज गर्दा १० प्रतिशत बोनस उपलब्ध गराइएको छ । त्यसैगरी रु.१० र सो भन्दा बढी एम्पोसमार्फत रिचार्ज गर्दा समेत १० प्रतिशत बोनस उपलब्ध गराइएको छ।
युट्युब डाटा प्याकेज
जिएसएम प्रिपेड तथा पोष्टपेड मोबाइलमा युट्युब डाटा प्याकेज अन्तर्गत एक सय रुपैयाँमा १ जिबी डाटा भोल्युम प्राप्त हुनेछ । यो प्याकेज २१ दिनको अवधिसम्म प्रयोग गर्न सकिने छ ।
त्यसैगरी ६० रुपैयाँमा ५ सय एमबी डाटा भोल्युम १४ दिनका लागि उपलब्ध हुनेछ । यो प्याकेज २०७४ असोज ५ गते देखी १९ गते सम्म लिईसक्नु पर्ने छ ।
यो प्याकेज लिनका लागि ….. वा …… लेखेर १४१५ मा एसएमएस पठाउनुपर्छ ।
जिएसएम तथा सिडिएमए प्रिपेडरपोष्टपेड मोबाइलमा कम्पनीकै नेटवर्क भित्र भ्वाइस, एसएमएस र डाटा प्याकेज अन्तर्गत १० रुपैयाँमा ६ मीनेट भ्वाइस, ५ वटा एसएमएस र १५ एमबी डाटा भोल्युम प्राप्त हुनेछ । यो प्याकेज १ दिनको अवधिसम्म प्रयोग गर्न सकिने छ ।
त्यसैगरी २५ रुपैयाँमा १६ मीनेट भ्वाइस, १६ वटा एसएमएस र ३५ एमबी डाटा भोल्युम ३ दिन अवधिका लागि उपलब्ध हुनेछ । ५० रुपैयाँमा ४५ मीनेट भ्वाइस, २५ वटा एसएमएस र ७० एमबी डाटा भोल्युम ५ दिन, १ सय रुपैयाँमा ११० मीनेट भ्वाइस, ३० वटा एसएमएस र १५० एमबी डाटा भोल्युम १० दिन र ३ सय रुपैयाँमा ३६० मीनेट भ्वाइस, ४० वटा एसएमएस र ६ सय एमबी डाटा भोल्युम ३० दिनका लागि उपलब्ध हुनेछ । यो प्याकेज २०७४ असोज ५ गतेदेखि १९ गतेसम्म लिईसक्नु पर्ने छ ।
यो प्याकेज अन्तर्गत १० रुपैयाँमा ६ मीनेट भ्वाइस, ५ वटा एसएमएस र १५ एमबी डाटा भोल्युम लिनको लागि COMBO10 टाइप गरी १४१५ मा एसएमएस पठाउनु पर्छ ।
त्यसैगरी अन्यको लागि COMBO25, COMBO50, COMBO100 अथवा COMBO300 टाइप गरी १४१५ मा एसएमएस पठाउनु पर्छ । साथै …….. डायल गरेर पनि यो प्याकेज लिन सकिन्छ ।
जिएसएम तथा सिडिएमए प्रिपेडरपोष्टपेड मोबाइलमा कम्पनीकै नेटवर्क भित्र भ्वाइस प्याकेज अन्तर्गत १० रुपैयाँमा ११ मिनेट भ्वाइस कल प्राप्त हुनेछ । यो प्याकेज १ दिनको अवधिसम्म प्रयोग गर्न सकिने छ । त्यसैगरी २५ रुपैयाँमा ३० मिनेट ३ दिन अवधिका लागि उपलब्ध हुनेछ ।
५० रुपैयाँमा ७५ मीनेट ५ दिन, १ सय रुपैयाँमा २०० मीनेट १० दिन र ३ सय रुपैयाँमा ६५० मिनेट ३० दिनका लागि उपलब्ध हुनेछ । यो प्याकेज २०७४ असोज ५ गते देखी १९ गते सम्म लिईसक्नु पर्ने छ ।
यो प्याकेज अन्तर्गत अन्तर्गत १० रुपैयाँमा ११ मिनेट भ्वाइस कल लिनको लागि ……… टाइप गरी १४१५ मा एसएमएस पठाउनु पर्छ ।
त्यसैगरी अन्यको लागि VOICE30, VOICE75, VOICE200 अथवा VOICE650 टाइप गरी १४१५ मा एसएमएस पठाउनुपर्ने छ । साथै ………. डायल गरेर पनि यो प्याकेज लिन सकिन्छ ।
पीएसटीएन र सीफोन सेवामा बोनसः यो सेवाका ग्राहकहरुलाई न्युनतम मासिक महसुल रु.२०० मा १७५ स्थानिय कल निःशुल्क उपलब्ध गराइरहेकोमा असोज र कात्तिक महिनामा १०० र १०० स्थानिय कल थप गरी न्यूनतम मासिक महसुलमा कुल २७५ कल निःशुल्क उपलब्ध गराइएको छ ।
एडीएसएल, एफटीटीएच र वाइम्याक्समा अफर
असोज ११ देखि १८ भित्र भित्र अनलिमिटेड र भोल्युम बेस एसएसएल एमाउन्टको समयावधि समाप्त हुने ग्राहकहरुको समयावधि मिति १९ गतेसम्म थप गरिएको छ ।
त्यसैगरी त्यसै अवधिभित्र भित्र एडीएसएल, एफटीटीएच र वाइम्याक्मा को समयावधि समाप्त हुने ग्राहकहरुको समयावधि पनि १९ गतेसम्म थप गरिएको छ ।
जिएसएम तथा सिडिएमए प्रिपेडरपोष्ट सेवामार्फत कम्पनीकै नेटवर्क भित्र हुने एसएमएस सेवाको विद्यमान महसुल दरमा मिति असोज ११ देखि १९ गतेसम्म ५० प्रतिशत छुट उपलब्ध गराइएको छ । उक्त अवधिमा कम्पनीको नेटवर्कभित्र ५० पैसामा एसएमएस गर्न सकिनेछ ।
फोरजी सिम निःशुल्क परिवर्तनः कम्पनीले मिति असोज ०५ गतेदेखि कातिर्क ३० गते सम्म फोरजी सेवा लिनका लागि आवश्यक पर्ने सिम (यू सिम) परिवर्तन निःशुल्क गरिएको छ ।
यो सेवा कम्पनीका काठमाण्डौ, ललितपुर, भक्तपुर र कास्की जिल्लाका काउन्टरहरु मार्फत उपलब्ध हुनेछ । साथै विभिन्न महोत्सवमा स्थापित स्टलबाट पनि लिन सकिने छ ।
इस्टर्न रिजनः नेपाली टोलीको बिदाइ, च्याम्पियन बन्ने लक्ष्य
प्रहरी चौकी टिमुरेका ईन्सपेक्टरसहित १६ लाई निलम्बन गर्न पत्र
असल साहित्य सिर्जनामा साहित्यकारहरू क्रियाशील रहनुपर्छः राष्ट्रपति भण्डारी
एक हप्तापछि कार्यकाल सकिन लागेका खतिवडा बने सरकारका प्रवक्ता
पार्टीको निर्णय किन मानेनन् प्रधानमन्त्री ओलीले ?
ऊर्जामन्त्री पुनले गरे जन्मथलामा क्याम्पसका लागि ८ रोपनी जग्गा दान
टेष्ट वरियताः स्मिथ र विलियम्सन उक्लिए, खस्किए कप्तान कोहली